सुवेच्छा खड्काको फिटनेस » Enavanari
सुवेच्छा खड्काको फिटनेस
मिस नेपाल इन्टरनेशनल २०१२÷ नायिका
बिहानको शुरुवात कसरी गर्नुहुन्छ ?
म बिहानको शुरुवात फ्रेस भएर गर्छु । त्यसपछि पानी पीउछु अनि त्यसपछि सावर लिन्छु । त्यसपछि वर्कआउटको लागी जान्छु । वर्कआउटमा ७ः३० बजे देखि ९ः३० सम्मको समय विताउछु । त्यसमा इन्सेन्टिभ एक्सरसाइज हुन्छ । अनि मिलेसम्म जिम पनि जान्छु र सोना पनि जान्छु आवश्यकता अनुशार । त्यसपछि घर फर्कन्छु । अनि अफिस जानु छ भने अफिस र बाहिर जानु छ भने बाहिरको लागी तयार हुन्छु ।
म सकेसम्म सिम्पल खानेकुराहरु मात्र खान्छु । विहान फलफुल खाएर मात्रै अरु खानेकुरा खाने गर्छु । भेजिटेवल्स धेरैमात्रामा खान्छु ।
ब्रेकफास्ट ः प्रायः म ब्रेकफास्टमा सिरियलहरु खाने गर्छु । एग, एबोकेडो टोस्ट विथ एग (जुन मेरो सबैभन्दा फेवरेट हो) खान्छु अनि फ्रेस जुस खान्छु । कहिले काहिँ रोटी तरकारी खान्छु । त्यसपछि अफिस या बाहिर काम छ भने बाहिर जान्छु ।
लन्चः मेरो लन्च अलि ढिला हुन्छ । दुई बजेतिर रोटी, कहिले काहीँ थोरै राइस अनि भेजिटेबल्स खान्छु । बाहिर हुँदा पनि म भेजिटेवल्स नै खाने गर्छु ।
इभिनिङ स्नेक्सः इभिनिङ्ग स्न्याक्स म सधै खादिन । साथीहरुसँग भेटघाट हुँदा मात्रै हल्का भेजिटेवल्सहरु लिन्छु ।
डिनरः म ढिलामा ८ः३० सम्म बेलुकाको खाना खाइसक्छु । रोटी, भेजिटेवल्स, गेडागुडी, साँग, दाल, सूपहरु र कहिले काहिँ भेजिटेवल्स राखेर या प्लेन नूडल्स खाने गर्छु । म ननभेज कमै खान्छु ।
तपाई अरुलाई फिटनेसको लागि के के टिप्स दिन चाहनुहुन्छ ?
जतिसुकै व्यास्त भएपनि खानपिनमा ध्यान दिन आवश्यक छ । ब्यालेन्स डाइट हरेकको लागि आवश्यक हो । बिहानको शुरुवात पानीबाट गरौं अनि फ्रुट्स खाएपछि मात्रै अन्य खानकुरा खानुहोला । फ्रुट्सले डाइजेस्ट सिस्टमलाई राम्रो बनाउ छ । नेचुरल कुराहरु खानुहोस्, सकेसम्म उम्रेको गेडागुडी, धेरै भन्दा धेरै साँगपात अनि भेजिटेवललाई प्राथमिकता दिनुहोस् । आजकल बाहिर खाने चलन बढ्दै गएको छ तर त्यो भन्दा पनि सकेसम्म घरमा नै बनाएको खानेकुरा खानु राम्रो हो । केहि बनाउन नभ्याएपनि अण्डा मात्रै उमालेर टिफिनमा राख्नुभयो भने पनि स्वास्थ्यको लागि धेरै राम्रो हुन्छ ।